कार्तिक ०३ गते बुधबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ, हेर्नुहोस दैनिक राशिफल ! « गोर्खाली खबर डटकम
कार्तिक ०३ गते बुधबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ, हेर्नुहोस दैनिक राशिफल !
२०७८ कार्तिक ३ गते बुधवार प्रकाशित
अनावश्यक दौडधुपमा समय बित्नेछ । फाइदाका लागि योजनाहरू गोप्य राख्न आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक कारोबारमा सजगता अपनाउनु होला । दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिनेछ । पति पत्नीबीच घर सल्लाह नमिल्न सक्छ ।
बोलीको भरमा काम सम्पादन हुने योग छ । सुन्दर पहिरनमा रमाउँदै व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । अधिकारका लागि केही संघर्ष हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गरे पनि अरूको हातमा गइसकेको अवसर जोगाउन सकिनेछ ।
सहयोगीहरूले विपक्षीलाई साथ दिनाले काममा चुनौती देखिएलान् । आर्जित धन खर्च हुन सक्छ । तर आफ्नै प्रयासले लाभ मिल्न सक्छ । विभिन्न अवसरले पछ्याउने छन् । भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ ।
आज सनिबार सङ्कटाको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नु होस।